Akụkọ - ialọ ọrụ Jiafeng: Ngwaahịa RPET ga-abụ omume nke mmepe mmepe nke ihe n'ọdịnihu.
Ugbu a ọ dị oke mkpa iji kpuchido gburugburu ebe obibi. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọpụta mkpa ọ dị ịgbagharị na gburugburu ebe obibi ma sonye na RPET ma nye onyinye maka nchekwa gburugburu ebe obibi ụwa.RETET Fabric (Recycled PET Fabric) makwaara dị ka akwa coke karama green, bụ nke emere site na mkpuru ahihia eji eji akwa ohuru eji eji akwa ohuru echedo gburugburu ebe obibi ya.
N'ihe banyere mmepe na-adigide, ugbu a, ejirila ọtụtụ ihe eji eme enyi na gburugburu ebe a: a na-ahụkarị ahịhịa ma ọ bụ nke nkịtị na linen ebe niile, ihe RPET nọ n'ụzọ ， ka a ga-eji ya mee ihe EVA ma ọ bụ TPU megharịrị. ohuru ohuru. A na-azụlite ihe ndị na-emepụta ihe ọkụkụ dị ka osisi painiapulu na akwa banana ma tinye ha n'ọrụ.
A kwadoro Jiafeng ka ọ nọgidesie ike na mmụọ nke "eziokwu, ịtụkwasị obi, imekọ ihe ọnụ na ibikọ ọnụ", ebe ha agaghị emebi gburugburu.
Ve Tyvek agba atla）
Jiafeng na-ekwusi ike mgbe niile na iji ngwaahịa gburugburu ebe obibi bụ usoro bara uru maka ụwa.
Jiafeng nwekwara ụdị akpa ndị ọzọ nwere ihe dị iche iche dị iche iche na gburugburu ebe obibi. Dị ka eriri osisi, owu na-agba agba, ahịhịa akwụkwọ, akwụkwọ Tyvek, akwụkwọ kraft, TPU na ihe ndị ọzọ nwere ike ịgbanwe akpa anwansi na nke pụrụ iche.
1, Painia linen obere akpa
2, Reclycable owu akpa
3, Akwụkwọ ahịhịa akpa
4, Tyvek akwụkwọ akpa
5, Kraft akwụkwọ akpa
6, Cheta Eva
7, Ọzọ RPET akpa
E jiri ya tụnyere ọdịnala PET polyester, RPET abụghị naanị na-egosi ụdị osisi PET mana uru nke akwa owu.